Who We Are | Joseph Education University
Joseph Education Institute (JEI) is the first private Catholic Education Institute in Myanmar. JEI is set up by Joseph Kung Za Hmung @ Win Hlaing Oo who isaCatholic Christian man (a lay person) on 12 January 2015 in Yangon, Myanmar (Burma). After (5) years of academic achievements, Cardinal Charles Bo, Archbishop of Yangon, canonically approved this institutional statutes asaprivate association of Christian faithful in his archdiocese on 11 February 2020. It is enlivened by Christian inspiration, engaged in the pursuit of truth and knowledge, serving the human society, especially through the creative use of interdisciplinary approaches.
With the meeting decision of School Administrative Committee on 29 May, 2020, we hereby change our Institutional name to “Joseph Education University” to expand our academic programs at the undergraduate and graduate level to our humanity, validated from on 1 June, 2020.
This university isanon-profit institution administered byaqualified people who have different academic and business backgrounds. We are also very keen in having joint academic programs and educational association with foreign universities around the world. Any university which wants to have partnership with us, can reach us by our emails.
ဂျိုးဇက်ကုန်ဇမှုန်း (ခ) ဝင်းလှိုင်ဦးသည် ဂျိုးဇက်ပညာရေးကျောင်း Joseph Education Institute (JEI) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် စတင်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ဤကျောင်းသည် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်ဌာနမှ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော သင်တန်းကျောင်းဖြစ်သည်။
ဤကျောင်းကို ထူထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွှယ်ချက်များမှာ (၂)ခု ရှိသည်။ ပထမရည်ရွှယ်ချက်ကား၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ (အထူးသဖြင့် ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ) သည် ကက်သလစ် သာသနာတော်၏ ဓမ္မပညာများကို သင်ကြားခွင့်မရှိကြသည့် အခြေအနေကို တိုက်ဖျက်ပြီး ကက်သလစ်ရဟန်းများကဲ့သို့ သာမာန် ကက်သလစ်ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ကိုလည်း ဓမ္မပညာ၊ အသင်းတော်၏ ကာနွန်ဥပဒေများနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သွန်သင်ချက်များကို တတ်မြောက်စေပြီး ခရစ်တော် ဘုရား၏ တရားတော်ကို ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံနိုင်ရန်နှင့် တခြားသူများကိုလည်း ဝေဌသွန်သင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွှယ်သည်။
ဤ ပထမ ရည်ရွှယ်ချက်ကို စတင်နိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး၊ ကာဒီနယ် ချားလ်စ်ဘိုနှင့် (၃)နှစ် တိုင်တိုင် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပြီးနောက် ၎င်းဆရာတော်ကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် (၁၈)လကြာ သင်ယူရသော ဤအဝေးသင် ကက်သလစ် ဓမ္မသဂြိုလ်ဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာဒီဂရီ အစီအစဉ် Diploma Degree on Catholic Theological Studiesကို ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၁၂)ရက်နေ့ တွင် စတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤကျောင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကက်သလစ် အသင်းတော်ထဲတွင် ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်သော အဝေးသင် ကက်သလစ် ဓမ္မသဂြိုလ်ဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာဒီဂရီ အစီအစဉ် ဖြစ်သကဲ့သို့ သာမာန် ကတ်သလစ် ဘာသာဝင်တစ်ဦးက ပထမဆုံးထူထောင်သော ကက်သလစ် ဓမ္မသဂြိုလ်ဆိုင်ရာ ကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယ ရည်ရွှယ်ချက်ကမူ ၂၁ရာစု၏ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးသင်ကြားမှု နှင့် အလှမ်းကွာနေကြသေးသော မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်မောင်မယ်များက ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားပြီး အများပြည်သူ၏ ကောင်းကျိုးကို သယ်ပိုး လုပ်ဆောင်စေနိုင့်မည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးသော ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ် Private University ကို ဖွင့်လှစ်ရန် ဖြစ်သည်။
Our Vision ကျွနု်ပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်
ကျွန်ုပ်တို့သည် တက်မြောက် ကျွမ်းကျင်သော နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများကို မွေးထုတ်ပေးမည်။
Our Mission ကျွနု်ပ်တို့၏ တာဝန်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာတရား၏ သွန်သင်ချက်နှင့် ဘက်စုံပုံသွင်းခြင်း တို့ဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲစေမည့် တာဝန်သိတတ်သော နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ ပေါ်ထွန်းလာရေး တာဝန်ကို လုပ်ဆောင်ကြပါမည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ နှစ် ၃၀ ရည်မှန်းချက် (Our 30 Years’ Vision)
Diploma Institute Level